Semalt विशेषज्ञ: कसरी ट्रोजन बोटनेटबाट छुटकारा पाउने
जब तपाईंको सुरक्षा उपायहरू प्रामाणिक र विश्वसनीय हुँदैनन् तब ट्रोजन बोटनेट फैलिन्छ। प्रयोगकर्ताहरू जो धेरै सचेत छन् तिनीहरूले अज्ञात प्रेषकहरूबाट एट्याचमेन्टहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्, जो निर्दोष जस्तो देखिन्छन् र तपाईं केहि अनलाइन लेनदेनमा संलग्न भएको चाहन्छन्। यसका लागि, उनीहरूले तपाईंलाई विशेष लिंकहरूमा क्लिक गर्न आग्रह गर्छन्, जो सुरक्षित छैनन्। ट्रोजन संक्रमण प्रायः यी शंकास्पद संलग्नकहरू वा लिंकहरू मार्फत फैलियो। तीनिहरुमा बोट एजेन्टहरू हुन्छन् जुन तपाईको प्रणालीमा स्थापित हुन्छन् र यसलाई zombies जस्तो देखिन्छ। ज्याक मिलर, Semalt ग्राहक सफलता प्रबन्धक, भन्छन् कि ट्रोजन बोटनेटका धेरैजसो घटनाहरू रिपोर्ट गरिन्छ जब प्रणालीहरू कुनै खास रुटकिट वा ट्रोजन हर्ससँग प्रभावित हुन्छन् वा जब द्वेषयुक्त कोड कम्प्युटर प्रणालीहरूमा प्रवेश गर्दछन् र यसको स्मृतिको एक अंश बन्छन्।
यी संक्रमणहरू कसरी फैलिन्छ?
अन्य प्रोग्रामहरू जस्तै, ट्रोजन बोटनेट अनियमित रूपमा फैलिन्छ र कम्प्युटर उपकरणहरूको एक ठूलो संख्यामा सम्झौता गर्दछ। यी प्रोग्रामहरू तपाईंको कम्प्युटर उपकरणको अंश बन्छन् र तपाईंलाई सूचित गर्दैनन् कि उनीहरूले केहि अवैध कार्यहरू सक्रिय रूपमा गरिरहेछन्। धेरै जसो भागका लागि, ट्रोजन बोटनेट्स र संक्रमणले तपाईंको उपकरणमा कन्फिगरेसन प्रविष्टिहरू सिर्जना गर्दछ र यसको समग्र प्रदर्शन र कार्यक्षमतामा सम्झौता गर्दछ।
तपाइँको प्रणालीबाट ट्रोजन बोटनेटहरू कसरी हटाउने?
दुर्भाग्यवस, त्यहाँ ट्रोजन बोटनेट्स र अन्य बोटहरूको आगमन रोक्न कुनै तरिका छैन, तर तपाईं तिनीहरूलाई आफ्नो कम्प्युटरबाट पाँच अलग-अलग तरीकाले हटाउन सक्नुहुन्छ।
प्रक्रिया №१: अटोरनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
भाग्यवस, केहि कार्यक्रम र उपकरणहरूले तपाईंलाई ठूलो हदसम्म ट्रोजन बोटनेटहरू काट्न अनुमति दिन्छ। हामी तपाईंलाई Sysinternals वा Autoruns प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छौं। दुबै धेरै राम्रा प्रोग्रामहरू छन् र स्थापना गर्न सजिलो छ। एक पटक तिनीहरू स्थापना भएपछि, तपाईं तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो सक्रिय गर्न बिर्सनु हुँदैन। यस कार्यक्रमले सबै ट्रोजन बोटनेटहरू र परम्परागत बोटहरूको सूची दिन्छ, तपाइँलाई तपाइँको प्रणालीबाट हटाउन मद्दत गर्दछ।
प्रक्रिया №२: क्यास खाली गर्नुहोस्
एकचोटि तपाईंले यो प्रोग्राम स्थापना गर्नुभयो, तपाईंको क्यास खाली गर्न नबिर्सनुहोस्। मलाई यहाँ तपाईं बताउन दिनुहुन्छ कि ट्रोजन बोटनेट्सको बहुमतले उनीहरूका टुक्राहरू पछाडि छोड्दछ जब तपाईं तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्छ। त्यसैले क्यास खाली गर्दा सुनिश्चित हुन्छ कि तिनीहरूका सबै टुक्रा-टुक्रा हटाईन्छ, र तपाईंलाई अन्य सुरक्षा उपायहरू गर्न भाग्नुपर्दैन।
प्रक्रिया №№: एन्टिभाइरस वा एन्टि-ट्रोजन प्रोग्राम स्थापना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई अपडेट गर्नुहोस्
तपाईंले एन्टिभाइरस र एन्टी-ट्रोजन प्रोग्रामहरू स्थापना गर्न बिर्सनु हुँदैन र प्रत्येक दिन त्यसलाई अपडेट राख्नुहोस्। यी कार्यक्रमहरूले तपाइँलाई सबै ट्रोजन बोटनेटहरू हटाउन मद्दत गर्दछ, र डोएस आक्रमणहरू पनि धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले आफ्नो सुरक्षा प्याचहरू अपडेट राख्नु भएको छ र अतिरिक्त सुविधाहरू र सुविधाहरूको लागि तिनीहरूको भुक्तान गरिएको संस्करणहरू खरीद गर्न हिचकिचाउँदैन।
सिफारिस गरिएको एन्टिभाइरस कार्यक्रम र एन्टि-मालवेयर उपकरणहरू
कास्परपर्की, ESET Nod32, Avast, AVG, BitDefender, Antivir, र Trend Micro तपाईले खोज्न सक्ने सबै भन्दा भरपर्दो एन्टिभाइरस प्रोग्रामहरू हुन्। एन्टि-मालवेयर प्रोग्राममा मालवेयरबाइट्स, इमिसोफ्ट, र जेमाना समावेश छन्। तपाईं डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यी कुनै पनि एन्टिभाइरस वा एन्टि-मालवेयर प्रोग्रामहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ केही मिनेटमा ट्रोजन बोटनेटबाट छुटकारा पाउन। ती सबैले कसरी ट्रोजन मालवेयरले तपाइँको प्रणालीहरूलाई संक्रमित गरिरहेको छ भनेर जानकारी देखाउँदछ र तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर खोल्दा हरेक पटक स्क्यान चलाउन बिर्सनुहुन्न।